आज मिति २०७८ साल बैशाख १९ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस् -
[ May 6, 2021 ] कोरोना महा’मारीका बीचमा ‘कौन बनेगा करोडपति’ लिएर आउँदै अमिताभ समाचार
[ May 6, 2021 ] इण्डियन आइडल सिजन १२ का जज कस्ले कति लिन्छ पारश्रमिक ? नेहाले एक एपिसोडकै यति लिन्छिन् हे’र्नुहोस् समाचार
[ May 6, 2021 ] भरतपुर महानगरद्वारा घरबाटै बि’रामीलाई अस्पतालसम्म ल्या’उने व्यवस्था समाचार
[ May 6, 2021 ] आज मिति २०७८ साल बैशाख २३ गते बिहिबारको राशिफल हे’र्नुहोस् राशिफल
[ May 5, 2021 ] गत आइतबार मात्रै घर फ’र्किएका मदनकृष्ण श्रेष्ठ फेरि अस्पताल भर्ना समाचार
Homeराशिफलआज मिति २०७८ साल बैशाख १९ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज मिति २०७८ साल बैशाख १९ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
May 1, 2021 admin राशिफल 188
परिवारको मार्ग’दशर्न नमान्दा कार्यको क्षेत्रमा अपजस खेप्नु पर्नेछ । नयाँ मित्रहरु सगँ को भेट घाटमा सामा’न्य यात्रा तथा खर्च हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । अचल सम्पतीमा ह्रास आउनाले कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई रहन सक्छ । मान्य’जनको साथ छुट्नाले सामान्य चिन्ता सहनु पर्ला ।
आम्दानि मध्यम रहेता पनि बोलिको कारण साधारण दुर्घट’नाको सम्भाबना रहेको छ । नजिकका ब्यक्ति’हरुको साथ छुट्नाले सहकार्यमा झन्झट ब्यर्होनु पर्नेछ । कुनै पनि निर्णय हतासमा नगरैकै बेश हुनेछ । कामको क्षेत्रबाट सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । मालसामान हराउन सक्ला ।
जीबन साथीको सह’योगले गरिएको ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ मिल्नेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीएका कार्यहरु सजिलै पुर्ण हुनेछन । बोलिको प्रभा’बको कारण मान्यजन को साथ पाईनेछ । कार्य सम्पादनका क्षेत्रमा सावधानि साथै गोप्यता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
शुभ चिन्त’कको बृद्यि हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ । परोप’कारको क्षेत्रमा समय र धन खर्चनु पर्ने समय रहेको छ । अरुको पुर्ण बिश्वासले तपाईलाई आघात दिलाउला । सन्चित रकम खर्चको योग रहेको छ । नयाँ कामको थालनि नगरेकै बेश होला । कामको क्षेत्रबाट सा’मान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला ।
आफु भन्दा सानाको सहयो’गमा गरिएको कार्यहरु सफल रहनेछन । बौधिक ब्यक्ति’त्व सगँको सामिप्यता आगामी दिनलाई मार्गदर्शन बन्नेछ । मातृ पक्षको स्वास्थमा देखापरेको असरले सामान्य समस्या पैदा गर्न सक्नेछ । गरिरहेको काममा त्यती मन नला’ग्नाने सामान्य अप्जस आईपर्ने छ ।
सामान्य कठिनाई पश्चात म’नग्य आम्दानीका स्रोतहरु फेला पर्नाले मन उत्सा’हित रहनेछ । पारीवारिक झोरझमेलाको फन्दामा परिनाले दिन निरासा पुर्ण रहला । कार्य क्षेत्रमा लगाईको श्रमको उचित मुल्यांकन हुनेछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामा’न्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
आटँ शाहस’को कमीले कार्यमा ब्यबधान आउला । प्रतिपक्क्षी सबल रहनाले तपाईलाई आफ्नु कमजो’रीको महसुस हुनेछ । मनोरञ्जन पुर्ण यात्राको योग रहेको छ । हतासमा गरीएको कार्यले झन्झट दिलाउला । पारीवारिक सम्ब’न्धमा सुधार आउनेछ । सामान्य यात्रा हुन सक्छ । भोगबिलासमा समय ब्यतित हुनेछ ।
स्वास्थमा आएको खराबि:ले कार्यमा ढिलाई उत्पन्न गराउनेछ । अरुको अनुशरणले तपाईलाई समान्य झन्झट वा अपजस दिलाउन सक्नेछ । मनोबिला’सिताका सामान खरीद योग रहेको छ । दम्पति बिच सामान्य मनमुटाब रहला । बाणी तथा स्वास्थ क्षेत्रमा ध्यान दिएको बेश हूनेछ ।
जीबन साथीको सह’योगले ब्यापार ब्यवसायमा सुधार आउनेछ । जिद्यी स्वभाब तथा अरुले देखाएको बाटो अनुशरण नगर्नाले सामान्य दुर्घटना निम्त्या’उला । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु होला । सहि निर्णय हुन नसक्दा परिबारीक कलहको सा’माना गनुपर्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा समय खर्चिदा उत्तम रहनेछ ।
आफ्नु प्रिय ब्य’क्ति सगँको बियोगले मन नि’रुत्साहित रहला । अन्य ब्यक्तिको बिश्वास गर्ने बा’निमा सुधार ल्याउनु पर्नेछ । लापरबाहले धनमालमा सामान्य क्षति हुने सम्भाबना रहेको छ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । मान्यज’नको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नेछ ।
आम्दानी बृद्यि’का लागी बीद्योत ब्यक्तित्वहरुको मार्गदर्शन अबलंबन गर्नु लाभदाइक रहला । मित्र जनकोृ सह’योग बाट मन प्रशन्न रहला । बोलिको कारण साथि भाई टाढिन सक्छन । आय आम्दानिका क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ । मान’सिक तनावका कारण कार्य सम्पादनमा झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
स्वास्थ सम्बन्धी सामान्य सम’स्याले मनमा तनाब उत्पन्न गराउन सक्ला । परीस्थीति सगँ जुध्ने क्षमतामा बृद्धि हुनाले कार्य सफल रहनेछ । परिवारको सहयोगले बौधिक तथा आर्थीक बिकासको बाटो फेला पर्ने छ । मेहेनत को रामा्रे फल प्राप्त हु्नेछ । ब्यापार ब्य’बसायमा रामा्रे समय रहेको छ ।
अब पत्रकारलाई सूचना वि’भागको पास अ’निवार्य
कोरोना जितेर फ’र्केपछि मदनकृष्णले भाबुक हुँदै भने चम्चाले समेत खान सकिन (हे’र्नुहोस भिडियो)
आज मिति २०७७ फागुन २८ गते शुक्रबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
March 12, 2021 admin राशिफल 823
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) साजेदारी कार्यमा बि’शेष सजग रहनु होला । नयाँ कार्यको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ ।
March 24, 2021 admin राशिफल 741
आज मिति २०७७ फागुन ८ गते शनिवारको राशिफल हे’र्नुहोस्
February 20, 2021 admin राशिफल 1026
मेष राशी : उपल’ब्धिका लागि निकै मिहि’नेत गर्नुपर्ने समय छ । बन्ने निश्चय भएको काम अचानक बिग्रन सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर रहनाले जोस’जाँगरमा कमी आउनेछ । नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खनुहोला । अरूको भर
कोरोना महा’मारीका बीचमा ‘कौन बनेगा करोडपति’ लिएर आउँदै अमिताभ
इण्डियन आइडल सिजन १२ का जज कस्ले कति लिन्छ पारश्रमिक ? नेहाले एक एपिसोडकै यति लिन्छिन् हे’र्नुहोस्
भरतपुर महानगरद्वारा घरबाटै बि’रामीलाई अस्पतालसम्म ल्या’उने व्यवस्था
आज मिति २०७८ साल बैशाख २३ गते बिहिबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
गत आइतबार मात्रै घर फ’र्किएका मदनकृष्ण श्रेष्ठ फेरि अस्पताल भर्ना
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (171385)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (165356)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (164800)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (164799)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (163836)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (162327)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (161919)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (160381)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (155263)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145414)